मोबाइलको सिम चो’र्यो भन्दै मान्छेको ज्या’न जाने गरि कु’ट’पि’ट गरे, ३ जना महिलाहरुले कु’टेको आ’रोप (भिडियो सहित) – List Khabar
Home / समाचार / मोबाइलको सिम चो’र्यो भन्दै मान्छेको ज्या’न जाने गरि कु’ट’पि’ट गरे, ३ जना महिलाहरुले कु’टेको आ’रोप (भिडियो सहित)
admin July 28, 2021 समाचार Leaveacomment 63 Views
मोरंग । मोरंगमा एक गर्बावती महिलालाइ मोबाइलको सिम चो’रेको आ’रो’पमा नि’र्घा’त कु’ट’पि’ट भएको छ । गर्बावती महिलामाथि नि’र्घा’त कु’ट’पि’ट भएपछी उपचारका लागि अस्पताल; लगियो तर उनको मा’न’सिक अ’व’स्था कु’ट’पि’ट कै का’रण क’म्जोर भएको एक महिलाले बताएकी छिन । ति महिलाको ग’र्बमा भएको बच्चा पनि कु’टा’इको कारण नरहेको उनले बताएकी हुन् ।
३ जना महिलाहरुले सिम चो’रेको आ’रो’प लगाउदै उनीमाथि आ’क्र’म’ण गरेको उनले बताइन । यो घ’ट’नाको बास्तबिकता के हो ? अनि उनि माथि कसरी महिलाहरुले आ’क्र’मण गरे ? साथै अहिले उनको अ’वस्था कस्तो छ ? तल भिडियोमा यो घ’ट’नाको बिषयमा सम्पूर्ण कुराहरु हेर्नुहोला ।
अमेरिकी को,रोना खोप लगाएका २८ जनाको मृ,rत्यु भएपछि अनुसन्धान शुरु ,
अमेरिकी को,रोना खोप लगाएका २८ जनाको मृ,त्यु भएपछि अनुसन्धान शुरु , काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिकामा अमेरिकी कम्पनीहरुले बनाएको को,रोना खोप लगाएका मानिसहरुको मृ,त्यु भएसँगै उक्त खोपबारे अनुसन्धान शुरु भएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको स्वास्थ्य उत्पादन नियामक (सहप्रा)ले मृ,त्युको प्रत्यक्ष सम्बन्ध खोपसँग रहेको वा नरहेको भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने भएको हो ।
सहप्राका अनुसार मृ,त्यु हुनेमध्ये २४ जनाले फाइजरको खोप लगाएका थिए भने चार जनाले जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप लगाएका थिए । सहप्राका अनुसार को,रोनाविरुद्धको खोप लगाएकामध्ये ३ हजार ७३० जनामा को,रोना खोपको असर देखिएको थियो ।
Previous राजलाई देखेर शिल्पाले आफ्नो होस गुमाइन्, यो सब किन र कसका लागि गर्यौ भन्दै गरिन विवाद ?
Next इनार खन्दा भेटियो झन्डै १२ अर्बको नीलमणि